Al-Shabaab oo shaaciyey Magacyada & Sawirrada raggii weeraray hoteelka DusitD2 ee Nairobi - Awdinle Online
Al-Shabaab oo shaaciyey Magacyada & Sawirrada raggii weeraray hoteelka DusitD2 ee Nairobi
Al-Shabaab ayaa markii ugu horreeysay soo bandhigay magacyada & Sawirada xubnihii ka tirsanaa ee fuliyay weerarkii lagu qaaday Hotelka DusitD2 ee Nairobi 14-kii Bishii Janaayo ee sanadkii 2019-kii.
Magacyada & sawirada ayaa waxaa la socda Muuqaala la daawan karo muddo 7 daqiiqo ah, kaas oo ku saabsan sida uu weerarka u dhacay & dhismayaasha uu ka kooban yahay Hotelka DusitD2 ee magaalada Nairobi.
Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen 5 ruux oo ka tirsanaa, waxaana ay sheegeen in weerarkaasi uu jawaab u ahaa tallaabadii uu Donald Trump magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Yahuudda.
Magacyada raga weerarkaasi fuliyay ayaa waxaa Al-Shabaab ay ku kala sheegeen.
1: Cusmaan Axmed Xasan
2: Cali Saalim
3: Cabdi Qani Carab Yuusuf
4: Maxamed Aadam Nuur
5: Maahir Khaalid
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo warbaahinta la hadlay xilligii la soo geba-gabeeyay weerarkaas ayaa sheegay inay dileen dhamaan dagaalamayaashii weerarka ku qaaday Hotelka, isla markaana khasaaraha dhimashada ay gaareyso 14 ruux oo ahaa dadkii ku sugnaa Hotelka.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo kulamadii ugu dambeeyay ka wada Garoowe
Next articleMaxkamadda Sare ee Puntland oo Go’aan ka gaartay Xildhibaanadii xasaanada laga qaaday